Qoraalka Asturnaanta: Martin Vrijland
Goobtaan (sida dhammaan gobollada Midowga Yurub) waxaa lagu qasbay inay soo gudbiyaan qoraal qarsoodi ah oo ku saleysan xeerka cusub ee AVG kaasoo saameyn doona 25 May 2018.
1. Macluumaadka xiriirka Stichting Martin Vrijland
Saldhigga waxaa lagala xiriiri karaa foomka xiriirka ee boggan.
Rugta Ganacsiga: 60411996
Dhismaha: St. Caelciliapad 5, 6815GM, Arnhem
2. Macluumaadkaaga waxaa ururiya boggan ujeedooyin kala duwan:
iska diiwaangelinta boggaan
in aad awood u leedahay in aad u dirto cinwaanka e-mailkaaga
noqoshada xubin ka mid ah mushaar bixinta oo ah qaab deeqsi ah
in ay xakameyn karaan helitaanka maqaallo gaar ah
diiwaangelinta si aad u hesho ogeysi toos ah ee muuqaalka maqaal cusub oo ku yaala boggan adigoo e-mail ah
diiwaan galinta helitaanka warside todobaadle ah iyo / ama boosteejo kale
Fekerkaaga ra'yi dhiibashada ra'yi dhiibashada
tirakoobka tirakoobka tirada dadka soo booqda iyo hits
samaynta xiriirka saxda ah ee warbaahinta bulshada taas oo ka dhigaysa wadaagida maqaal fudud
inaad awood u leedahay inaad ogaato inaad isticmaalayso adblocker
3. Dhinacyada kuwaas oo awoodi doona inay helaan xogta shakhsi ahaaneed ee lagu shaqeynayo:
Macluumaadkaaga ayaa markii hore lagu kaydin doonaa adeegga gaarka ah ee Martin Vrijland Foundation.
Waxaa intaa sii dheer, xogtaada waxaa loo gudbin doonaa bixiyeyaasha sirta ah ee sadexaad ee isticmaala xogtaada xogta, sida ku xusan qodobka 2. Tani waxay khusaysaa qodobbada soo socda iyo sidaas darteed shirkadaha dhisey plugins kuwaas:
AdBlocker Ogeysiis Lite themeisle.com
Xayeysiinta Horukacsan by Thomas Maier
Foomka xiriirka 7 Takayuki Miyoshi
Email-u-qorayaasha macaamiisha Gopi Ramasamy
MailChimp adoo mailchimp.com
Shaxda Baarista iyo Qiimeynta ee Automattic, Inc.
Dhisme Muuqaal ah by Cozmoslabs
Xakamee Content Pro Xakamee Kooxda Content Pro
Ka hortaga bulshada Prisna
Dagaalka Bulshada - Pro by Qalabka Wareejinta
4. Muddada macluumaadkaaga la keydiyay:
Xogtaada waxaa la keydin doonaa / ama la isticmaali doonaa inta lagu jiro mudada aad ka diiwaangashan tahay goobtan. Waa inaad si firfircoon uga noqotaa naftaada oo aad soo gudbiso codsi si aad u tirtirto macluumaadkaaga. Macluumaadkaaga warsidaha iyo / ama helitaanka akhbaarta tooska ah ee ku saabsan qoraallada cusub ee la soo dhejiyey ayaa sidoo kale la keydin doonaa inta aad adigu iska diiwaangashan tahay. Xaaladaha oo dhan, waa inaad si firfircoon u saxeexdaa dhammaan adeegyada ku yaal meeshan.
5. Xuquuqda ku saabsan macluumaadkaaga:
Waxaad xaq u leedahay inaad aragto, saxdo ama tirtirto macluumaadka. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad diiddo isticmaalka xogtaada shakhsi ahaaneed. Waa inaad horey u sameysatid tan. Haddii aad rabto inaad sidan sameyso ka dib, waxaad ku samayn kartaa qoraal adiga oo warqad diiwaangashan adoo tixgelinaya cinwaanka boostada Martin Vrijland, sida lagu sheegay Rugta Ganacsiga. Si kastaba ha noqotee, haddii ay u muuqato in ay jirto ujeedo sharci ah oo lagu ururinayo xogtaada, aasaasku wuxuu xaq u leeyahay inuu sii wado isticmaalka iyo haynta xogtan. Ma aha diidmo kasta oo lagu qeexay qeexitaan.
6. Jawaabaha maqaalka:
Dhammaan faallooyinkaaga kuugu soo dhejiyey waa gebi ahaanba koontadaada. Taas macnaheedu waa in dhammaan kiisaska aad masuul ka tahay waxa aad qoraysid; xitaa haddii ficilladani marka hore la ansixiyo iyada oo la adeegsanayo maamulaha goobta si loogu dhigo qodobbada.
7. Xaqqa inaad wareejiso macluumaadkaaga:
Machadka Martin Vrijland wuxuu xaq u leeyahay inuu xogtaada u wareejiyo dhinacyada saddexaad si loo isticmaalo xogta xogta haddii ay tani tahay mid waafaqsan adeegyada laga bixiyo boggan. Tani waxay noqon kartaa in hirgelinta plugin software in sameeya qaar ka mid ah falanqaynta on statistics ah, laakiin waxa ay sidoo kale ka codsan kartaa in la beddelo adeegyada adeeg mail sida boostada ama updates ku saabsan articles cusub posted. Tani waxay sidoo kale codsan karaan, tusaale ahaan, u dhaqaaqo server ama marti bixiyaha.
8. Xaqqa inaad ka noqoto macluumaadkaaga:
Websaytka martinvrijland.nl waxay bixisaa xulasho 1 ah oo aad ku tilmaami karto inaad rabto in xogtaada aan mar dambe la isticmaalin. Tani waxay ku xiran tahay xaq u lahaanshaha. Waxaad isticmaali kartaa xuquuqdaada dib u celinta adiga oo gudbinaya codsi la saxiixay oo qoraal ah iyadoo loo marayo nuqul kaar aqoonsi ah ama baasaboor iyo shaashadda cinwaankaaga IP. Tani waxay cadeyneysaa inaad tahay qofka aad sheeganeyso. Tan waxaa lagu sameyn karaa marka la eego cinwaanka boostada Martin Vrijland, sida lagu sheegay Rugta Ganacsiga. Si kastaba ha noqotee, haddii ay u muuqato in ay jirto ujeedo sharci ah oo lagu ururinayo xogtaada, aasaasku wuxuu xaq u leeyahay inuu sii wado isticmaalka iyo haynta xogtan. Ma aha diidmo kasta oo lagu qeexay qeexitaan. Dukumentiyada aad dirtay ayaa la baabi'in doonaa ka dib marka la xaqiijiyo.
9. Awooda macluumaadka shakhsi ahaaneed:
Waxaad xaq u leedahay inaad soo gudbiso cabasho ku saabsan isticmaalka macluumaadkaaga macluumaadka shakhsiyeed ee hay'adda. Tani waa xuquuq sharci ah. Sidaa darteed haddii aad qabto cabashooyin ku saabsan sida website-kani ula dhaqmo macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed, waxaad si sharci ah kuugu soo wargelin kartaa xogta shakhsi ahaaneed.
10. Ka-noqoshada xogta:
Haddii aadan rabin inaad bixiso macluumaadkaaga ama haddii aad rabto inaad ka noqoto, ma isticmaali kartid adeegyada lagu bixiyo boggan. Maamuluhu wuxuu xaq u leeyahay inuu xakameeyo cinwaanka IP-gaaga si uu u booqdo boggan.
11. Helitaanka xaddidan:
Iyadoo bixiyo xubin ka ah in aad soo galaan qaab deeq go'an bishiiba, ama iyada oo loo marayo kala iibsiga bangiga soo noqnoqda, reperterende PayPal ama kala iibsiga credit soo noqnoqda, ay isticmaalaan macluumaadka si loo go'aamiyo haddii aad qabto helitaanka badeecooyinka qaarkood daboolay by helidda kooban. Intaas oo dhan waxaa gacanta ku dhex plugin ah oo otomaatik, sida ku xusan qodobka 3, la Xaddid Content Pro. Sidaa darteed xogtaada ayaa loo isticmaalaa si loo go'aamiyo bal in aad haysatid maktabada kaliya ee akhristo xubnaha.
12. Xubinta qeexitaanka:
Qeexida xubin waa: qofkii soo galay dib u bixinta qaab deeq ah oo loogu talagalay aasaaska Martin Vrijland mudo cayiman ama aan xadidnayn iyada oo loo marayo mashaariic dhaqaale iyo cidda xidhiidhkan saxiixay. Haddii aad tahay xubin, waa inaad awood u yeelataa inaad hesho macluumaadkaaga hoostiisa xidhiidhkan. Waxaad sidoo kale hagaajin kartaa ama ka saari kartaa hay'addaada ku saabsan xubinimadaada. Xubinnimadaada marwalba waxaa loo arkaa inay tahay deeq loogu talagalay aasaaska Martin Vrijland.
Guud ahaan Wadarta: 1.341.210